Sidee waxtar u leh Mashruuca Optimization Search for ganacsiga, gaar ahaan marka la eego mashaariicda yar-yar ee maraakiibtu?
Maanta, dad badan oo ka sii badan ayaa iibsanaya iibsigooda iyaga oo adeegsanaya awooda weyn iyo raaxaysiga internetka. Taasina waa sababta keentay inay u noqdaan kuwa ugu caansan in ay sameeyaan heshiis khadka internetka ah oo ku dhawaad ​​shay kasta oo aad raadineyso. Haatan wax badan oo ka mid ah iibsiyadaas ayaa la xitaa xitaa si fudud, maaddaama dadku isticmaalayaan mashiinnada raadinta si ay u galaan su'aal muhiim ah oo ugu dambeyntiina, waxay ogaadaan waxa ay u baahan yihiin. Oo halkan yimaadana waxaa ku soo baxaya jawiga SEO! Laakiin sida loo isticmaalo fursadaha ugu dhow ee Mashiinka Raadinta ee Macaamilka ee aad ka shaqeyneyso hab-dajiye-daro? Waxaan kugula talin lahaa inaad aragti gaaban ka bixiso talooyinkan asaasiga ah ee hoose. Waxaan rajeynayaa in ay ka caawin doonaan mashaariic badan oo munaasab ah oo macaamiisha ah si ay uga badbaadaan adduunkii tartanka suuqa tartanka ka bilowday bilowgii hore. Halkan waa!
si ay u qabtaan cilmi baarista saxda ah ee saxda ah. Waxaan u jeedaa halkan waxaad u baahan doontaa inaad ka fekerto ereyo iyo odhaaho gaar ah, kuwaa oo ku habboon ganacsigaaga, sidoo kale waxay u badan tahay in loo adeegsado isticmaalayaasha baaritaan raadinta markaad raadineyso alaabada ama adeegyada. Trick waa in la helo dheelitirka ugu caansan ee ka dhexeeya caansaanka iyo tartan aad u ballaaran ee niche. Waxaan u maleynayaa inay jiraan tiro badan oo ah codsiyada raadinta sida "macbook pro 13", laakiin aad u yaryar kuwa yaryar sida "qiimaha ugu fiican ee macbudka madow ee ah 13 bandhig sawir". Kaliya maskaxda ku hay markaad dooraneyso ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah ee boggaaga internetka.
Hayso Mawduuc Kalsooni leh Saameynta Isku-dhafan
Xasuusnow - waa mawduucaaga boqorka. Marna ha u jeesan wakhti aad ku qaadatid dadaal aad ku abuurayso waxyaabo tayo sare leh, hodan ku leh ereyada muhiimka ah ee erayga. Fikradda waa mid sahlan - waxaad u baahan tahay kaliya inaad haysatid mawduucaaga macluumaadka (akhrin - waxtar leh) ee martida ugu badan. Taas oo sidan ku sameeya, waxaad xor u tahay inaad ku dhejisid boggagaaga bogga leh qaabab badan oo isticmaala macaamiisha kala duwan sida YouTube videos. Taasi waxay siin doontaa booqdayaashaada talobixin wanaagsan, tababbar, ama sharaxaadda sheyga iyo tilmaamaha, taasoo keeneysa natiijooyinkaaga ganacsiga sare. Isla mar ahaantaana, sii wad si aad ula socoto soo jiidashada content, gaar ahaan ka eeg aragtida matoorada search. Sidaa daraadeed, ha ilaawin inaad u baahan tahay in lagu qadariyo raadraacayaasha raadinta, inay si fiican u dardar geliyaan iyaga, taas oo hadda ka sareysa natiijooyinka raadinta Google. Taasi waa habka saxda ah ee ganacsiga macaamiil-saarista maraakiibta, oo ku yaalla meel kasta oo adduunka ah.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee Mashruuca Optimization ee Ganacsiga waa geedi socod dhisid oo isku xiran
. Waxaa loola jeedaa in aad haysatid dib u eegis tayo leh oo ku xiraya shabakada internetka iyo ilaha kale ee internetka si aad u hesho booqashooyin dheeraad ah, markaa waxaad kordhineysaa taraafikadaada, kor u qaadida booskaaga hadaad raadineyso natiijooyinka raadinta Google, iyo inaad siiso macaamiisha aan horumarin, taas oo noqon karta loo beddelay kuwa dhabta ah. Ha ka baqin dadaalka ku saabsan sameynta posts ee shirarka, dhowaan la soo rogay fiidiyowyada YouTube, iyo xidhiidhada warbaahinta ee kala duwan. Waxay noqon karaan qalab wax ku ool ah oo waxtar leh haddii la isticmaalo caqli ahaan. Aniga ahaan, waxaan ku talineynaa in aan kiraysto khabiirada si aad u qabato shaqooyinkan ugu yaraan marxaladaha ugu horreeya ee horumarinta ganacsigaaga. Wax kasta oo hawshaada tahay, kama qoomameynaysid, waan hubaa.
Waqtiga ugu dambeeya, faa'iidooyinka dhabta ah ee Mashruuca Optimization Search for ganacsigu ma suurtageli karto inuu ku habboonaado kaliya laba ama seddex qaybood Source . Laakiin waxaan rajeynayaa in tilmaamaheyga kooban uu ka caawin doono qaar ka mid ah jilbaha fudud ee ku filan, sidaas darteed waxaan ku farxi doonaa halkaan!